အမေ: February 2008
အမေ ကျွန်တော့် အခေါ်
မေမေပေါ့ . . .
ပြန်လမ်းတွေ မိုးမမြင် လေမမြင်
ဟိုးမှာ မေမေ၊ ဟိုးမှာ. . .ဖေဖေ
ဟိုးမှာ ညီမလေးတွေ၊ ဟိုးမှာ ချစ်သူ
ဟိုးမှာကတော့ မေမေ့မြေးလေးတွေပေါ့ . . .
သား ကြားနေမိတယ် ကြောက်နေမိတယ်
သားမနားဘူး မေမေ သားဆက်လျှောက်ဦးမယ်။
နေ့ နေ့ ည ည ဘ၀
ပြုတ်ကျ တစစီ ကွဲပျက်ခဲ့ပြီ
မေမေ့ အသံ တိုးတိုးလေး
ပြုပါ သားရင်ဘတ်နဲက ဖူးပွင့်ချင်လို့ပါ။
မေမေ့ပေါင်မှာ သားခေါင်းအုံးလို့ အိပ်ချင်နေပြီ
ရနံ့ ပြင်းတဲ့ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ
အရုဏ်တက်ရင် သားကို နှိုးပါ
မေမေရေ . . .
အဲဒီအိပ်မက်က မေမေ မွေးတဲ့
သားတစ်ယောက် ဖြစ်ထွန်းနေရဲ့ . . .။ ။
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:53 AM0comments
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:50 AM 1 comments
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:36 AM0comments
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:32 AM0comments
သိမြင်လာရ၊ “အလှ” “အလုပ်”
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:30 AM0comments
သကာ့ပျားနှယ်၊ နားဝ ချိုအိ မွှေးလှသည်။
စမ်းရေဖြာသို့၊ ရင်မှာ ချမ်းမြေ့ အေးမြသည်။
တေးသံစဉ်နှင့်၊ ပုံပြင် နားထောင်ခဲ့ဖူးသည်။
အမေ့သွေးနှင့် သားလေးလူလား မြောက်ခဲ့သည်။
အမေ ဆုံးမ၊ သြ၀ါဒနှင့်
ကူးခတ်ဆဲသာ၊ အောင်ပွဲတစ်နေ့ ရလိမ့်မည်။
သြော် ကျေးဇူးရှင် အမေ
မွေးရပ်မြေ၌၊ သာစေ မာစေ
လက်စုံမိုး၍၊ ရှိခိုး ကန်တော့လိုက်တကား။
၁၉၉၂ခုနှစ် ငွေတာရီ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၃၈၆ ဒီဇင်ဘာလထုတ်
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:29 AM0comments
ကျွန်တော်က ကဗျာနဲ့ ရိတ်တယ်။
Posted by သားနှင့်သမီး at 2:25 AM0comments